Iholide yosapho eYurophu inokuba yinto emnandi kubazali nakubantwana bayo yonke iminyaka ukuba ucwangcise kakuhle. IYurophu ngumhlaba iinqaba kunye iibhulorho, iipaki eziluhlaza eziluhlaza kunye noovimba apho amantombazana kunye namakhwenkwe amancinci anokuzenza ngathi amakhosazana kunye neenkosana usuku. Nazi iindlela ezinkulu zokunyuka intaba kunye neendawo ezininzi zokuzonwabisa kwindawo entle engaphandle, kodwa ukuhamba nabantwana kunzima.
Imfihlelo yeholide enkulu yosapho kuxa lonke usapho lukhwele kwaye bonwabile. IYurophu izele kakhulu lwimi emangalisayo, iindawo ezinika umdla zotyelelo, Iipaki zokuzonwabisa, neendawo zokundwendwela, kwaye ukuthatha inxaxheba kwabantwana bakho ekucwangciseni uhambo lwakho oluya eYurophu kuya kujika kube liholide lamaphupha. Yenza uphando lwakho kwangaphambili, khetha umtsalane ofuna ukutyelela, kunye namabala abantwana bakho baya kuthanda, emva koko ukhethe abantwana 3-4 Umtsalane kuluhlu. Ngale ndlela wonke umntu wonwabile kwaye unento ajonge kuyo yonke imihla.
I-Airbnb ibiza ixabiso eliphantsi, ngakumbi ngasese, kwaye uziva ekhaya, ebaluleke kakhulu kubantwana xa ukude nekhaya. I-AirBnB lukhetho olukhulu lokuhlala kusapho lwaseYurophu kuba iihotele eYurophu zibiza kakhulu, Nditsho nesivumelwano sakusasa. Ukuhlala kwa-Airbnb kukunika ikhitshi lokupheka, isidlo sasemini-sokuhamba, kunye nexesha lesidlo sakusasa xa unokuxoxa ngosuku.
Uninzi lweepaki luyafikeleleka nge train ukusuka kumaziko amakhulu esixeko. Ukuba ucwangcisa kwangaphambili kwaye uzilungiselele, akukho sizathu sokuba ungonwabi ngaphandle nangaphandle kwaye wonwabele umoya omtsha, amahlathi, kunye neepaki ezinomxholo.
Kufuneka uyazi ukuba iivenkile zokutyela eYurophu aziboneleli ngokutya kwabantwana, ke abantu bayo abadala’ izabelo zomntu wonke. Oku kubaluleke ngakumbi ukuba uqaphele umzekelo ukuba undwendwela e-Itali, awuyi kufumana ubungakanani bepitsa yabantwana okanye iinxalenye zepasta, Zilungiselele.
Ungazenzela ngokwakho ngemephu kunye neencwadi kunye neeapps, kodwa ukujoyina isikhephe okanye uhambo lokuhamba yeyona nto ilungileyo. Kwizixeko ezininzi zaseYurophu kukho izixeko ezikhululekileyo zokuhamba ngesikhokelo sendawo. Esi sikhokelo sichwayitileyo siza kubonisa kwaye sixelele iimfihlo zesixeko ezigcinwe kakuhle, ngaphandle kokuba ulahleke ezitalatweni ’maze. Isikhokelo siya kuthi sibonise iivenkile zalapha ekhaya kunye neeseti zesidlo sasemini kwaye sinike elona cebiso lililo kwinto ekufuneka yenziwe esixekweni.
Uninzi lweedolophu zaseYurophu ziya kuba ne-carousel eqaqambileyo kwaye intle kwisikwere esikhulu sedolophu. Endaweni yokubalekela kwindawo elandelayo, yeka, kwaye vumela abantwana ukuba baqhubeke nokukhwela kangangoko bafuna. Ukonwabela ukukhwela i-carousel xa i-Eiffel Tower ilapha emva kwakho, Ngumzuzu ongalibalekiyo kubantwana abaselula kunye nabantu abadala.
Ngaba ufuna ukufaka iposti yethu yebhlog "Iingcebiso ezili-10 eziLungileyo kwiiholide zosapho eYurophu" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://embed.ly/code?url =I-https://www.saveatrain.com/blog/tips-family-vacation-europe/ ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)